Fetim-pirenena : Atao etsy amin’ny Esca Antanimena ny « Arendrina 2018 » -
AccueilRaharaham-pirenenaFetim-pirenena : Atao etsy amin’ny Esca Antanimena ny « Arendrina 2018 »
Lalao sy fialamboly navondrona amin’ny toerana iray. Fanaon’ny ankizy ary hiarahan’izy ireo amin’ny lehibe rehefa ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny fahaleovan-tena ny fitondra arendrina. Izay fahazarana izay no noraisin’ny starlette Communication sy ny Jet com, hanolorana hetsika iray nantsoina hoe « Arendrina 2018 ». Atao etsy amin’ny tokotaniben’ny Esca Antanimena izany hetsika izany ny 25 sy ny 26 jona 2018. Ankoatra ireo lalao samihafa natokana ho an’ny ankizy manomboka amin’ny 9 ora maraina, dia hanana ny anjara toerany ihany koa ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany. Anisan’ireo karazan-dalao ho hita etsy Antanimena ny « manège », « auto-tamponeuse », ny fitaingenana soavaly, tranoheva ahitana lalao samihafa. Toy izany koa ny « paintball »n ny fandokoana tarehy, lalao « vidéo »…
Etsy ankilan’izay dia ho maromaro ireo mpikosoka kapila hanafana ny hetsika rehetra ary toy izany kosa ireo mpanakanto eo amin’ny sehatry ny mozika sy ny hakingana toa an-dry Jess Flavi one, Jasmin sy Jasmine…
Tafiditra amin’ireo fialam-boly ao anatin’ny « Arendrina 2018 » ihany koa ny fifaninanana dihy izay karakarain’ny tarika « Danse encore ». Mazava ho azy fa hisy ireo loka ho an’ireo mpandresy amin’izany fifaninanana izany.